SpinIt Online Casino | Ibhonasi Yokwamukela yamahhala engu-R15,000
Ikhaya / Amakhasino / isibuyekezo se-spinit online casino
Isibuyekezo se-SpinIt Online Casino
Isofthiwe:Microgaming, NetEnt, Play n GO, NYX Gaming, Evolution Gaming
200 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Uma kubalulekile kuwe, ukuthi ikhasino ye-inthanethi ibukeke inhle nokuthi ibe lula ukuyisebenzisa, sicabanga ukuthi uzoyithanda kakhulu i-Spinit Casino.
Le ngenye yamasayithi ekhasino amahle kakhulu atholakala kubadlali baseNingizimu Afrika, futhi inenzuzo eyengeziwe yokulawulwa kahle nokubhekwa yi-UK Gambling Commission kanye ne-Malta Gaming Authority
I-Spinit Casino inendikimba yomhlaba wonke kepha iyabamukela kakhulu abadlali base-Afrika, futhi izindaba ezimnandi wukuthi ungadiphozitha noma ukhiphe imali ku-akhawunti yakho usebenzisa iRandi laseNingizimu Afrika – asikho isidingo sokushintsha imali nokunye okunjalo!
Ngemidlalo engaphezu kwengu-1,300 ongayizama kanye nebhonasi yokukwamukela enkulu ukuze uqalise, kunokuningi kokuncoma i-Spinit Casino kubadlali abafuna ikhasino entsha enhle kakhulu ukuzama.
2021 Amakhodi Amabhonasi Okukwamukela e-Spinit Casino
Ize ifike ku-R15,000 kanye nama-spin amahhala angu-200 Ize ifike ku-R15,000 kanye nama-spin amahhala angu-200 Kunebhonasi yokukwamukela enamazinga amane ekulindile e-Spinit Casino eyisamba esingu-R15,000, kanye nama-spin amahhala angu-200 kudiphozithi yakho yokuqala, uzonikezwa ibhonasi engu-100% efinyelela ku-R3,000 nama-spin amahhala angu-20 ku-Starburst. Bese kuba namabhonasi atholakala kumadiphozithi akho amathathu alandelayo: Idiphozithi yesibili - 50% ize ifike ku-R3,000 Idiphozi yesithathu - 25% ize ifike ku-R4,500 Idiphozi yesine - 25% ize ifike ku-R4,500 Futhi uzothola ama-spin amahhala angu-20 ezinsukwini eziyisishiyagalolunye ezilandelayo ngemuva kokubhalisa
Amakhodi Ebhonasi Yediphozithi Engekho e-Spinit Casino
Ngeshwa, okwamanje, i-Spinit Casino ayinayo iphromoshini yebhonasi yediphozithi engekho yokunikeza amakhasimende ayo, ngakho-ke ayikho ikhodi yebhonasi yediphozithi engekho yokubika. Kodwa-ke, iphakheji yokukwamukela ekhona inama-spin amahhala angu-200, ngakho-ke lokho ngokuthize okuncane ongakujabulela.
Amanye Amaphromoshini Akhethekile Anikezwa yi-Spinit Casino
We Love Mondays We Love Mondays Diphozitha ngoMsombuluko bese i-Spinit Casino ikunikeza ibhonasi yokudiphozithi kabusha ka-25% ngaphezulu - ungathola imali efinyelela ku-R1,500.
The Spinner’s Choice Jabulela ama-spin amahhala nebhonasi yokudiphozitha kabusha njalo ngoLwesibili lapho udlala Umdlalo Wesonto we-Spinit Casino.
Weekend Spin Diphozitha imali eqala ku-R150 ku-akhawunti yakho ngoLwesihlanu noma ngoMgqibelo bese unikezwa ibhonasi ka-50% nama-spin amahhala angu-20.
Live Casino Welcome Bonus Lapho wenza idiphozitha elandelayo, sebenzisa i-'‘Live casino bonus’' kumenyu eyehlayo. Uzonikezwa ibhonasi ka-100% efinyelela ku-R1,500 ongayisebenzisa emidlalweni ebukhoma.
Indlela Yokungena Ngemvume Nokubhalisa e-Spinit Casino
Uma ungahlola phezulu kwekhasi lasekhaya le-Spinit Casino, uzobona ibhanela elimnyama elincanyana elibhalwe ‘Sign up now’ ngamagama aphuzi.
Uzocelwa ikheli lakho le-imeyili nokuthi ucabange ngegama lomsebenzisi nephasiwedi, ngaphambi kwemibuzo ephathelene nobunikazi nekheli lasekhaya ezobuzwa. Yiphendula, khetha indlela yokukhokha bese wenza idiphozithi. Uzobe usulungele ukuqala!
Lapho ubuyela e-Spinit Casino ngolunye usuku, uzobona inkinobho ye ‘Log in’ etholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla.
Imidlalo Yasekhasino Ye-inthanethi Ongayidlala e-Spinit Casino
Njengoba kushiwo, kunemidlalo engaphezu kwengu-1,300 etholakala e-Spinit Casino, kepha ibambisene nezinkampane ezinjenge-NetEnt, Microgaming ne-Play’n Goa, abadlali bangaqiniseka ukuthi kunekhwalithi yokuhambisana nenani lemidlalo.
Noma yini okuthandayo kanye nesimo sesikhwama sakho, i-Spinit Casino izoba nemidlalo yama-slot ekufanele kulabhulali yayo enkulu.
Kune-three-reel ne-five-reel yakudala kanye nama-slot e-3D okumele uzibonele ukuze ukholwe. Ngemidlalo egcwele okuthize nezici ezikhethekile namabhonasi, ama-slot e-Spinit Casino azokufaka ekugcineni kwesihlalo sakho ngawo wonke ama-spin.
Ukuze uzizwele ukunambitheka kwama-slot atholakalayo, imidlalo yakudala efana ne-Starburst ne-Book of Dead ihlala eduze kwama-slot adumile anjenge-Drako’s Fire and Finn kanye ne-Swirly Spin.
Ungakhohlwa ukuthi kukhona ama-slot e-jackpot ekhula njalo (progressive), lapho isikhwama somklomelo sanda njalo ngemizuzu yosuku.
Imidlalo Yesetafuleni Yakho Yakudala
Kunezigaba eziphelele zelabhulali ye-Spinit Casino ezihlose i-blackjack ne-roulette, ngakho-ke lokhu kuyisibonelo senani lemidlalo etholakalayo.
Into enhle wukuthi ungaguqula isenzo njengoba ufisa – kunezinguqulo zendabuko nezaseYurophu zazombili, kanye nezinhlobo ezihlukile ezibandakanya ijubane, i-multi hand, i-VIP nokunye okuningi.
Eminye imidlalo yasetafuleni etholakala e-Spinit Casino yi-baccarat ne-poker, futhi i-Hold’em ne-Casino Stud kuyathandwa kakhulu kokubili.
I-Baccarat ihlezi ingenye yemidlalo yasekhasino ethandwa kakhulu, futhi i-Spinit Casino inikeza izinhlobo eziningana ezahluka hlukene zalo mdlalo wekhadi kanye ne-Dragon Tiger ne-Sic Bo. Ikhasino ebukhoma, okwamanje, igcwele wonke amagama angenhla akhethekile anjenge-Football Studio ne-Dream Catcher.
Spinit Mobile Casino: I-Spinit Casino Iqhathaniseka Kanjani Kuselula?
Ukukhombisa ukuzibophezela kwayo ngokuphelele kubo bonke abadlali, i-Spinit Casino yenze okuthize okungenziwa ngawo wonke amakhasino – yakhe isayithi esebenza kusiphequluli seselula, kunokuba yenze amakhasimende ayo asebenzise ikhasino ye-inthanethi engahambisani nenhloso.
Umphumela wukuthi iwebhusayithi yeselula ye-Spinit Casino isebenza njengewashi, ibukeka kahle, futhi inelabhulali enkulu yemidlalo naphezu kokuba yisayithi encane.
Ngingayidawuniloda Yini i-Spinit Casino Casino Kuselula Yami?
Ayikho i-app ye-Spinit Casino noma isofthiwe edawunilodekayo ongayisebenzisa. Kepha, ungakhathazeki, ngoba isayithi yesiphequluli seselula iyamangaza.
Izindlela Ezivunyelwe Zokukhipha Imali e-Spinit Casino
Visa/Mastercard Yebo Izinsuku 1-5
Skrill Yebo Amahora 0-24
Neteller Yebo Amahora 0-24
Trustly Yebo Amahora 0-24
Entropay Yebo Amahora 0-24
Bank Transfer Yebo Izinsuku 3-5
Izindlela Ezivunyelwe Zokudiphozitha Imali e-Spinit Casino
Isungulwe: 2016 Inombolo Yocingo Yamahhala yase-SA: +0800980822
Umphathi ngu: Genesis Global Limited I-imeyili: [email protected]
Ilayisense: Malta Gaming Authority, UK Gambling Commission, Swedish Gambling Authority Ingxoxo Ebukhoma: Yebo
Uhlobo Ongaludawuniloda: Cha Usizo lwe-24/7/365: Cha
Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Uhlobo Olungadingi Ukudawunilodwa: Yebo Iwebhusayithi: Chofoza lapha ukuvakashela isayithi
Yini Eyenza Ukuthi I-Spinit ikhethwe Kakhulu Ngabadlali baseNingizimu Afrika?
Amadiphozithi/ukukhipha imali kungenziwa ngeRandi
Imidlalo eminingi evela ku-NetEnt, ku-Microgaming, njll.
Isayithi yeselula eyakhelwe inhloso isebenza kahle
SPINIT CASINO NINGIZIMU AFRIKA IZIKHALO
Alukho usizo lwe-24/7
Ayikho i-softhiwe/i-app edawunilodekayo
Imibuzo Evame Ukubuzwa (FAQs)
Ingabe i-Spinit Isemthethweni eNingizimu Afrika?
Ungadlala ngokusemthethweni e-Spinit Casino eNingizimu Afrika naphesheya – inelayisense futhi ilawulwa ngokugcwele, ukuze ube nethemba kupulatifomu.
Ngiyikhipha Kanjani Imali ku-Spinit Casino?
Sethemba ukuthi uzowina isamba esihle e-Spinit Casino, futhi ukusikhipha, udinga ukuya esigabeni sebhange se-akhawunti yakho lapho ungene ngemvume.
Yini i-Spinit Casino?
I-Spinit Casino yiwebhusayithi yemidlalo ewina imiklomelo enelayisense ye-UK Gambling Commission kanye ne-Malta Gaming Authority yokuhlinzeka ngama-slot nemidlalo yasetafuleni esezingeni eliphakeme kubadlali baseNingizimu Afrika nabakwamanye amazwe.
Ngubani umnikazi we-Spinit Casino?
Umnikazi we-Spinit Casino yi-Genesis Global Limited futhi iphethwe yiyo. Iphinde iphathe amanye amasayithi anjenge-Casino Planet, i-Vegas Hero, i-Casino Gods namanye amaningi.
Ingabe i-Spinit Casino Inezici Zokubhejela Ezemidlalo?
Ngeshwa, i-Spinit Casino ayinazo noma yiziphi izici zokubhejela ezemidlalo, ngakho-ke kuzofanele uzithole kwenye indawo – i-Spinit Casino yemidlalo yasekhasino kuphela.
Ingabe i-Spinit Casino Inikela Ngohlelo lwe-VIP?
Kukhona uhlelo lwe-VIP oluhle kakhulu lwesimemo e-Spinit Casino olwengeza izinzuzo zangempela, ezibonakalayo kumidlalo yakho. Uzothola ukwesekwa ngokezifiso zakho, amaphromoshini akhethekile njalo ngempelasonto, amabhonasi osuku lokuzalwa, ukubuyiselwa ukheshi namaphromoshini ahlelelwe wena, nokunye okuningi. Uzophinda umenywe ukuthi ubambe iqhaza emncintiswaneni wanyanga zonke lapho ongawina khona ezinye izinto ezimnandi!
Ziyini Izidingo Zokubheja Ukuze Ukhiphe Imali e-Spinit Casino?
Izidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali e-Spinit Casino zingu-40x, okuyinani elijwayelekile kulezi zinsuku embonini futhi yinani ongalilindela kwamanye amakhasino. Lokhu kusho ukuthi udinga ukubheja izikhathi ezingu-40 inani lebhonasi ngaphambi kokuthi ukhiphe imali oyiwinile, ngakho-ke lokhu kufanele kukhunjulwe ngesikhathi ufezekisa izimfuneko ze ‘play through’.